REMME: blockchain हामीलाई लगइनहरू र पासवर्डहरूबाट छुटकारा दिनेछ? | Martech Zone
बिहीबार, मार्च ० 22, २०२० बिहीबार, मार्च ० 22, २०२० Douglas Karr
अझ रोमाञ्चक प्रविधि मध्ये एक ब्लकचेन हो। यदि तपाईं ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अवलोकन चाहनुहुन्छ भने - हाम्रो लेख पढ्नुहोस्, ब्लकचेन टेक्नोलोजी के हो। आज, म यो ICO भरमा भयो, याद गर्नुहोस्.
ICO एक प्रारंभिक सिक्का प्रस्ताव छ। आईसीओ तब हुन्छ जब कसैले लगानीकर्तालाई नयाँ क्रिप्टोकरन्सी वा क्रिप्टो-टोकनको केही एकाइहरू बिटकॉइन वा इथरियम जस्ता क्रिप्टोकरन्सीहरूको बिरूद्ध विनिमय प्रस्ताव गर्दछ, यस अवस्थामा REMME
फोर्ब्सका अनुसार, साइबर अपराध लागत २०१ by सम्ममा २ ट्रिलियन डलरमा पुग्नेछ। यि धेरै उल्लंघनहरू प्रयोगकर्तानाम र पासवर्डहरूको क्रुर बलले आक्रमण गर्छन्। REMME टेक्नोलोजीले पासवर्डहरूलाई अप्रचलित बनाउँदछ, प्रमाणीकरण प्रक्रियाबाट मानव कारक हटाउँदै। यहाँ एक सिंहावलोकन भिडियो छ:
र हामी ठूला निगमहरू देख्न जारी राख्छौं जसले तिनीहरूका सबै प्रयोगकर्ता र पासवर्ड डाटा ह्याक गरेका छन्, ह्याकर्सलाई एकल, केन्द्रीकृत डाटाबेसबाट डाटाको भारी मात्रा चोर्नका लागि एक साधन प्रदान गर्दै। एक वितरित डाटाबेसको साथ, यो हुन सक्दैन - यसलाई संवेदनशील जानकारी भण्डारण गर्ने सबैभन्दा सुरक्षित तरिका बनाउँदै।
संग याद गर्नुहोस्, तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूले फारमहरू भर्न आवश्यक छैन वा लामो, जटिल पासवर्डहरू आवश्यक पर्दैन। केवल एक सरल, सुरक्षित क्लिकको साथ प्रमाणीकरण। र त्यो क्लिक दोहोर प्रमाणिकरणको साथ संयोजन गर्न सकिन्छ।
REMME ले उनीहरूका सुविधाहरू विस्तृत छन्:
प्रमाणपत्र केन्द्र छैन - त्यहाँ प्रमाणपत्र केन्द्रको आवश्यक छैन - तपाईं आफ्नो भाग्य नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। ब्लकचेन सर्टिफिकेसन प्राधिकरणको ठाउँ लिदै, तपाईंको कम्पनीले पैसा बचत गर्दछ र अधिक स्वतन्त्र हुन्छ।
ब्लॉकचेन र सिडेचैन्स - REMME प्रणाली विभिन्न blockchains र sidechains को एक नम्बर संग प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाइँ तपाइँको कम्पनी को लागी सब भन्दा सुविधाजनक संयोजन छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको पहिचान नियन्त्रण गर्नुहोस् - तपाईको निजी कुञ्जी तपाईको गोप्य कुञ्जी हो र रहन्छ। यसको सट्टामा, तपाइँको निजी कुञ्जीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको REMME प्रमाणपत्र कुनै पनि वेबसाइट वा सेवाको लागि तपाइँको सार्वजनिक कुञ्जीको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ।
प्रयोगकर्ताहरूले खाताहरूको असीमित संख्यामा पनि दर्ता गर्न सक्दछन्, जुनसँग धेरै SSL- प्रमाणपत्रहरू छन्। कुनै पनि समयमा लग इन समयमा, तिनीहरू कुन खाता प्रयोग गर्न रोज्न सक्दछन्।
REMME को पायलट प्रोग्राममा स Join्लग्न हुनुहोस्